[Ukara] dr.fone Toolkit - iOS WhatsApp Nyefee, ndabere & Weghachi
dr.fone Toolkit - iOS WhatsApp Nyefee, ndabere & Weghachi
Aka gị WhatsApp Chat, Easily & Flexibly
Nyefee iOS WhatsApp na iPhone / iPad / iPod aka / gam akporo ngwaọrụ.
Ndabere ma ọ bụ mbupụ iOS WhatsApp ozi kọmputa.
Weghachi iOS WhatsApp ndabere ka iPhone, iPad, iPod aka na gam akporo ngwaọrụ.
Nyefee WhatsApp History effortlessly na bibiri
N'agbanyeghị na ị na-enwe ihe karịrị otu ngwaọrụ ma ọ bụ dị nnọọ chọrọ ịgbanwe gị ochie ngwaọrụ a ọhụrụ otu, i nwere ike iji nke a usoro bibiri nyefee gị WhatsApp chat akụkọ ihe mere eme n'etiti gị iPhone na iPad. Mgbe ịmafe ka ihe gam akporo ngwaọrụ, ọ pụkwara inye aka nyefee WhatsApp mkparịta ụka site iPhone / iPad ọhụrụ gị gam akporo ngwaọrụ. Ihe ọ bụla ihe ị chọrọ, gụnyere Mgbakwụnye.
Nyefee WhatsApp Ozi bibiri
Ịnwere ike ịnyefe WhatsApp ozi iOS ngwaọrụ iOS ma ọ bụ gam akporo ngwaọrụ bibiri.
Ndabere WhatsApp Ozi Easily
Ị nwere ike ndabere WhatsApp ozi na gị iPhone / iPad na kọmputa na otu click.
Preview WhatsApp ndabere Content
I nwere ike na-agụ ihe niile nkọwa gị WhatsApp ndabere faịlụ, dị ka ozi na Mgbakwụnye. Ele ihe ị chọrọ.
Export Ozi si WhatsApp ndabere
I nwere ike bibiri mbupụ ozi WhatsApp ndabere dị ka ihe HTML faịlụ. Ọ dị mma ka ị na-ebipụta ma ọ bụ ịkọrọ ya.
Weghachi WhatsApp ndabere
Dị ka iji weghachi WhatsApp ozi, ị nwere ike iweghachi ya ma iOS na gam akporo ngwaọrụ. Ọ bụ a onye-click ọrụ.
Na-arụ ọrụ dị ukwuu, iPhone, iPad na iPod aka
N'agbanyeghị na ị na-eji ọhụrụ iPhone 7, iPad Pro, ma ọ bụ ochie iPhone 4, iPad 1, a iOS data mgbake bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na niile ụdị nke iPhone, iPad na iPod aka.
Nke a WhatsApp nkwado ndabere na mpaghara weghachite na omume na-kpam kpam na-agụ-na-software. Ọ gaghị anọgide na, gbanwee ma ọ bụ ihihi ọ bụla data na ngwaọrụ gị ma ọ bụ na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ. Anyị na-gị onwe onye data na akaụntụ kpọrọ ihe. Ị na-na na mgbe niile bụ naanị onye nwere ike ịnweta ya.
Ndabere ma ọ bụ Export WhatsApp na Mkparịta ụka
Ọ na-eme ka ndabere gị WhatsApp akụkọ ihe mere eme nnọọ mfe karịa mgbe. Ijikọ iPhone / iPad ma na-arụ otu click, na nkwado ndabere na-arụ ọrụ site na ya onwe ya. E wezụga, i nwere ike ịhụchalụ na-elele ihe ọ bụla ihe ị chọrọ na mbupụ ya na kọmputa gị dị ka ihe HTML faịlụ maka ịgụ ma ọ bụ na-ebi akwụkwọ.
Weghachi WhatsApp ndabere na iOS / gam akporo Ngwaọrụ
Ekwu okwu nke na WhatsApp ndabere faịlụ, ị nwere ike ihichapụ ha na kọmputa gị ma ọ bụrụ na ị na-achọghị na-ha, na ị nwere ike iweghachi ha gị iPhone / iPad ma ọ bụ gam akporo ngwaọrụ mgbe e dị otú ahụ a mkpa. Ọ nwere ike mere n'ime otu click.
Ọ na-agụ data, ọ dịghị data n'ihe ize ndụ.
100% mma software, ọ dịghị nsogbu gị na kọmputa ma ọ bụ ngwaọrụ.
Ọ dị onye ọ bụla, ọ dịghị tech ihe ọmụma jụrụ.
I nwere ike na-agbalị nke software for free maka ụbọchị 30.
Akwado iOS ngwaọrụ
Akwado WhatsApp Files
chat akụkọ ihe mere eme
Ọ bụla faịlụ Mgbakwụnye
iOS 10, iOS 9 na mbụ
dr.fone Toolkit Nyere m ihe ịga nke ọma-agafere WhatsApp data si ochie m android ekwentị m ọhụrụ iPhone Ghaat.
dr.fone Toolkit bụ ọkachamara ngwa iji naghachi faịlụ site na gam akporo ngwaọrụ ozugbo naghachi ehichapụ SMS na kọntaktị, tinyere aha, nọmba na e-mail na adreesị, na mbupụ ha HTML, nakwa dị ka foto na video furu efu n'ihi nhichapụ.
Ka Kim, iOS
Afọ Ojuju nke a software dị nnọọ mma maka iweghachi WhatsApp data.
Ndabere WhatsApp Ozi Online na gam akporo na iPhone
Olee otú iji weghachi WhatsApp Ozi na iPhone na gam akporo Ngwaọrụ
Olee otú Dịghachi ehichapụ WhatsApp Images / Pictures
Olee otú iji weghachite WhatsApp Ozi na iPhone
WhatsApp ndabere extractor: Gụọ WhatsApp na Mkparịta ụka gị Computer
6 Ụzọ ndabere WhatsApp Ozi
Flexibly ndabere & weghachi viber chats na gị iPhone, iPad, ma ọ bụ kọmputa.
Ndabere na weghachite ihe ọ bụla ihe on / ka a na ngwaọrụ, na mbupụ ihe ị chọrọ site na nkwado ndabere na mpaghara gị na kọmputa.
Idozi dị iche iche na iOS usoro nsogbu dị ka mgbake mode, na-acha ọcha Apple logo, nwa ihuenyo, looping na mmalite, wdg